ANDRESENA NY TAHOTRA NY FINOANA | FJKM Amboniloha
Maro ny zavatra mampanahy sy mampatahotra antsika amin’izao vaninandro iainantsika izao: simba ny tontolo iainana izay mitondra aretina maro samihafa, tsy misy ny fandriampahalemana izay zary sakana lehibe ho amin’ny fandrosoan’ny firenena. Tahotry ny mosary, ny loza sy ny fahoriana miseho amin’ny endriny maro samihafa no mameno ny fontsika matetika. Raha misy ny vahaolana tsara miroso eo anoloantsika dia toa tonga indray koa ny tahotry ny hiroso ho amin’ny tsaratsara kokoa ho amin’ny fahombiazana ary tsy sahy fa matahotra ny hiatrika ireo fahavalon’ny fandrosoana. Ambara aminao anefa tsy dia ny olana misy loatra no tena sakana fa io tahotra io izay mila resena tokoa hiatrehana ny olana. Ny finoana sy fahatokiana ny tenin’ny Tompo Izay efa nandresy ny fahavalo rehetra, eny fa na dia ny fahafatesana aza no entintsika andresena ny tahotra. Koa aza matahotra, minoa ary matokia fa handresy ianao miaraka amin’i Jesoa. Fahavalo efa resy Satàna sy ny forongony. Fa hoy indrindra Izy: “Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.” (Jao.16, 33)
Andriamanitra lehibe sady mahery ny Andriamanitrao; Velona ny Mpanavotra anao sady Tompon’ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy vitan’izany fa izao koa: rehefa miantso Azy marina tokoa ianao dia manafaka anao amin’ny tahotrao rehetra Izy (Sal.34, 4) ary manome ho anao fahefana hanitsaka menarana sy maingoka ary ny hery handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ka tsy hisy hampaninona anao akory (Lio.10, 19). Aza matahotra, Fiadanana ho anao, Fiadanana avy amin’Ilay Jesoa Kristy Velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita (Apo.1, 18). Sambatra ianao raha mialoka amin’i Aminy.
Ry Kristiana Malagasy havako ô! Aoka tsy ho fombafomba ivelany fotsiny no anompoana an’Andriamanitra fa tena ho fiainanao. Raiso ary Ampiasao ilay fahefana omen’i Jesoa Kristy ho anao io hiatrehanao ny fiainanao, handresenao ny tahotra . Ny Tompo izay mbola hampamoaka izay rehetra nataonao any am-parany, Ilay Fiandohana sy fiafaràna, Alfa sy Omega no aoka hatahoranao fa tsy olombelona na Satàna. “Aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin’ny helo” (Mat.10, 28). Ialao ny filàna sitraka sy ny fiankinan-doha amin’olona fa amin’ Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonao (ITes.2, 1-12). Tsarovy fa “Ho voaozona izao olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin’i Jehovah ny fony…Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny” (Jer.17, 5).
Tsy tara raha izao ianao no mametraka ny fiainanao sy adinao eo amin’Andriamanitra Tomponao. Tapaho ny hevitrao: Aza matahotra, aza manaiky ho eo ambany fahefan’i Satàna izay fahavalo efa resy, ialao ny fanompoantsampy raha mbola ao anatin’izany ianao fa tsy hahavonjy anao io. Ento ho eo anatrehan’i Jesoa Tompo ny fandrahonan’ny fahavalo fa Izy handray an-tanana ny adinao (Asa.4, 29). Andramo ka izahao fa tsara Izy (Sal.34, 8). Hanala anao avy ao anaty aizina ho amin’ny Fahazavany mahagaga Izy. Fa hoy Izy: “Izaho tonga amin’izao tontolo izao ho fahazavàna, mba tsy hitoetra ao amin’ny maizina izay rehetra mino Ahy…izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina fa hanana ny fahazavan’aina” (Jao.12, 46; 8, 12);
Meteza hohavaozin’Andriamanitra ny fiainanao. Mifohaza, aza matory fa mijoroa ho vavolombelony. Aoka hanaiky hofenoin’ny Fanahy Masina ianao ka hanaiky hijoro amin’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fahasahiana toa izay nataon’ireo Apostolin’i Jesoa Kristy. Mahereza, minoa fa Mpandresy ianao ao amin’i Jesoa ilay efa naharesy izao tontolo izao. Raiso ny Tenin’Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary ny finoana Azy ho ampinganao. Mivavaha ka aza mitsahatra.